भिडियो खेलाउने नाममा डेटिङ र बिवाहको प्रस्ताव धेरै आयो–मैले नाइँ भने नब मोडल -सुजता – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १५:५७
समाजमा युवा पुस्ताको मोडलिङ क्षेत्रमा आकर्षण बढेसँगै अवसर र चुनौतीहरु समेत धेरै बढेको छन । युवा पुस्ताको सर्बाधिक रोजाइमा परेको मोडलिङ क्षेत्र दिनानुदिन फैलिदै गएको छ l मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरेकी नव मोडल हुन् सुजता भट्टराई ।नृत्य तथा अभिनयमा पोख्त मोडल सुजाता सुन्दर मुहार र आकर्षक शरीरको धनी छिन चिटिक्क मिलेको शरीर अनि सुन्दर मुहारनै उनी प्रतिको आकर्षण हो । उनी मेहनतका साथ अभिनय र कलालाई अँझै निखारता ल्याउदै मोडलिङ नगरीमा स्थापित हुन चाहन्छिन ।खोटाङ्ग जिल्ला कात्तिके दुर्गम गाँउमा जन्मेकी नव कलाकार सुजता भट्टराई सग जिवन शर्मा अन्तरकुन्तर कुराकानी ।
सबभन्दा पहिला तपाई आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
म पनि अरु जस्तै सामान्य मान्छे नै हुँ । भखरै मात्र मोडल क्षेत्रमा आएकी छु
कलाकारितामा कहिलेबाट कसरी लाग्नुभयो ?
कलाकारितामा लागेको दुई वर्ष भयो । मेरो रुचीका साथै बाबा र मामुको हाैसला र सपोट प्ररणा ले कलाकारितामा लागेँ मैले म्युजिक भिडियो बाट सुरु गरेकी छु वहाँ हरू दुबैको इच्छालाई सँगै अगाडि बढाउँदै छु ।
अहिलेसम्म कति वटा भिडियोमा अभिनय गर्नुभयो ?
अहिलेसम्म ७/८वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेँ ।
लकडाउनमा कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
लकडाउनका नियम पालना गर्दै छु । लकडाउन खुलेपछि आउट हुने भिडियो को योजना बनाउँदै छु । घरमै बस्छु, नियमित व्यायाम गर्छु ।
मोडलिङ क्षेत्रमा सुरुआतका दिनमा कस्तो चुनौति थिए ?
निश्चित रुपमा चुनौति निकै थिए। विशेषत पुरुष मानसिकतावाट हामी मोडलहरु धेरै पीडित छौ। त्यसमाथि, डेटिङ प्रस्तावले त म वाक्कै बनेकी छु। त्यस्ता वाहियात लभ गरू पछि विवाह जस्तो प्रस्ताववाट ज्यादै ह्यारेसमेन्ट बनेकी थिए। त्यो ह्यारेसमेन्टवाट यो लाइन नै छाड्न खोजेकी थिए। त्यस्ता वाहियात मान्छेहरुलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढे्की छु। यो नै मेरो सफलता हो। मोडलिङ अगाडि बढ्नु पर्छ।
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईलाई सवैभन्दा नराम्रो लाग्ने पक्ष के हो ?
नयाँ कलाकारलाई हेप्ने प्रवृति मलाई मन पर्दैन ।
मोडलिङमा भविष्य सम्भव होला त ?
मलाई सानैदेखि यस क्षेत्रप्रति आकर्षण थिए। प्रतियोगितालाई मैले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकेँ भन्ने लाग्छ । भविष्यमा मोडलिङ र रंगक्षेत्रमा लाग्ने योजना छ ।
तपाईलाई मनपर्ने आफ्नै शरीरको अंग ?
आँखा राम्रो लाग्छ ।
अब केही मायाप्रेम सम्बन्धि प्रश्न गरौँ ?
एकले अर्कामाथि गर्ने विश्वास नै माया हो ।
कलाकारिता क्षेत्रमा बढी नै लभका कुरा हुन्छन किन् होला ?
यो क्षेत्रमा मान्छे खुलेर कुरा गर्छन, त्यसको फाइदा होला सायद ।
तपाई मायामा पर्नुभएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म छैन, अब बिस्तारै विचार गर्नुपर्ला ।
अन्तमा कोरोनाबाट बच्न तपाईले के गर्दै आउनुभएको छ ? तपाईका स्रोता, दर्शकलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ ?
घरमै बस्दै आएकी छु । काम विना बाहिर निस्केकी छैन् । स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्दै आएकी छु । मास्क, पञ्जको प्रयोग गर्ने गरेकी छु । स्रोता, दर्शकलाई मेरो आग्रह छ–कोरोना पूर्ण रुपमा अन्त्य नभएसम्म घरमै बस्नुहोला । आफ्नो केयर गर्नुहोला । घरमै बसौँ, सुरक्षित रऔँ ।